साहित्यलाई नचिन्नेहरुले गाली दिन्छन् – कदर न्यूज अनलाईन डिजिटल पत्रिका : Oneline Digital Kadarnews:
बन्दसत्रमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली आफुले पारेको केन्द्रीय कमिटीको नाम बाचन गर्दै
केन्द्रीय निर्वाचन आयोगले यस अघिको निर्वाचन कार्यतालिका परिमार्जित
निर्वाचन कार्यक्रम सार्वजनिकसँगै बन्दसत्र सुरु अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सम्बोधन जारी
उपाध्यक्ष भीम रावलद्धारा अध्यक्ष पदमा उम्मेदवारी मनोनयन फारम भरी हलभित्र छिरे
रातभरी निर्वाचनका प्रक्रिया सम्पन्न गरी भोलि बिहान ९ बजे मतदान
साहित्यलाई नचिन्नेहरुले गाली दिन्छन्
लेखक : दुख र छटपटीमा साथ दिने नै प्रकृति र साहित्य रहेछ । साहित्यबिनाको जिवन एक धमिलो पानीमा बाँचिरहेको माछा जस्तो हुन्छ । जिवनमा एक्लै जन्म्यौं, एक्लै आयौ तर पनि क्षणिक साथी मात्र भेटिदा रहेछन् । आखिर दुःख, संघर्ष र मनको आत्मियता आफैसँग मात्र हुन्छ । यि शब्दहरुका माला दुःखले सिर्जित बनाउदा रहेछन् । दुःखमा साथ दिने भन्दा घाउ चर्र्काएर सोझो पनको फाइदा लिने हुन्छन् । त्यसैले जिवन के हो, शिक्षा के हो, सौन्दर्य के हो, चरित्र के हो, इज्ज्यत के हो, सबै जानेर पनि त्यसलाई धमिल्याउने आफ्नादेखि परसम्मका हुन्छन् ।
प्रकासित : १८ चैत्र २०७६, मंगलवार
हो म साहित्यकार ओझेलमा परेकी ? कतिका प्रस्तावलाई अस्वीकार गरे हँुला । त्यसमा गाली गलौज पाए हँुला । विश्वासबिना रहेको देशमा कति प्रस्ताव मानु र कसरी विश्वास मान्नु म ? गाली, टिका, टिप्पणी भए होलान्, झगडा पनि कसरी गरु, एक साहित्यकार, सबैलाई सकरात्मक सोच्दासोच्दै जिवनका आधा पाटो जान लाग्यो । प्रस्तावका उत्तर दिन नसक्दा कति गाली खाए होला, त्यसमा पनि दुःख लाग्दछ । आखिर के नै रहेछ जिन्दगी केवल संघर्ष नै साथी रहेछ । दुख र छटपटीमा साथ दिने नै प्रकृति र साहित्य रहेछ । साहित्यबिनाको जिवन एक धमिलो पानीमा
बाँचिरहेको माछा जस्तो हुन्छ । जिवनमा एक्लै जन्म्यौं, एक्लै आयौ तर पनि क्षणिक साथी मात्र भेटिदा रहेछन् । आखिर दुःख, संघर्ष र मनको आत्मियता आफैसँग मात्र हुन्छ । यि शब्दहरुका माला दुःखले सिर्जित बनाउदा रहेछन् । दुःखमा साथ दिने भन्दा घाउ चर्र्काएर सोझो पनको फाइदा लिने हुन्छन् । त्यसैले जिवन के हो, शिक्षा के हो, सौन्दर्य के हो, चरित्र के हो, इज्ज्यत के हो, सबै जानेर पनि त्यसलाई धमिल्याउने आफ्नादेखि परसम्मका हुन्छन् । त्यो बेला सम्हालिन साह्रै गाह्रो भए पनि यी अक्षरका गन्तव्यले बादर हैन मान्छे बनाएर उठाएको छ । यिनै अक्षरका गन्तव्यलाई मृत्यु ठानी इमान्दारीको बाटो हिडेकी छु । अनि नाम र दामको पछि लाग्दछन् र दास बनाउँछन् । ति बाट तर्कन पनि साहित्यलाई अंगालोमा राखी हाँसी–हाँसी उठ्नु पर्र्दोरहेछ । साहित्य मूर्ति हो आवाज विहीनहरुको लागि ।
होस् नभएकाहरुले धोका दिन्छन्, प्रयोग गर्छन्, एसिड अनुहारमा फ्याक्छन् तर त्यसको पीडा त्यही पर्नेलाई मात्र थाहा हुन्छ । प्रेमको नाममा महिलालाई टर्चर दिइन्छ । उसले नमाने अर्को प्रतिस्पर्धी बनाएर विचार चोरी उछिन्न खोज्छन् । एसिड खन्याउछन्, बलात्कार गराएर अर्को
रोज्छन् तर के थाहा त्यहाँ भित्रको पीडा । त्यसैले ति चोटका बदलामा मलम लगाउने कुनै राजनीति नै छैन ? न कुनै साथी, आफन्त,
परिवार ? ति चोटमा मलम लगाउने केवल साहित्य हो ।
वास्तविकता अर्को छ । त्यही चोट र आफू सम्हालिन नसक्दा धेरै दायित्व वहन गर्नुपर्ने, आफैलाई हराउन खोज्ने र उठ्ने नदिनेको ? प्रतिस्पर्धी बोक्नु र तिनलाई समर्थन गर्नु नै दासत्व स्वीकार्नु हो । त्यसैले साहित्यले ति फोहोरी राजनीति एकातिर मिल्काएर सत्यताको बिऊ रोप्दछ । साहित्य सभ्य दस्तावेज हो जहाँ प्रतिस्पर्धी भन्दा नि यर्थाथताको कुरा गर्दछ । साहित्यलाई निरन्तरता दिने मेरो हात आफ्नै संघर्षमा दौडिने छ । हो म आफ्नो अधिकार र गर्भबाट विद्रोह गरेर चिहानमा पुग्दा पनि घिर्सी–घिर्सी यो नर्कमा आएकी छु । जिन्दगी अमिलो हुन्छ जहाँ तचगभ यिखभ नै रहनेछ, केवल भौतिकवादको प्रेम हुदोरहेछ । फेरी साहित्यको भर्याङ चढी अक्षरसँग ओल्टापोल्टा गरी तिनै अक्षरहरुले बाँच्न सिकाउछ र यर्थाथ लेख्न ।
यसरी साहित्यलाई बाँच्ने आधार बनाएर काम गर्न खोज्दा पनि उनीहरु लडाउन खोज्दछन्, उठाउन होइन । घरदेखि परसम्म प्रेरणा छैन, जहिले पनि समाजवादी बनेर आफ्नै दुश्मन उठाउदछन् । त्यसैले अक्षरहरुसँग दुःख साट्यो अनि बल्लतल्ल सास फेर्यो । शहरका घरमा भाडामा बस्यो, काम गर्न नजान्ने बनाउछन् घरबेटीदेखि भाडावालसम्म र मौका परे दास बनाएर मिच्न खोज्छन् ? २,४ पैसाको लोभमा बसेका शहरका भौतिकवादका मान्छेहरु पैसालाई आफ्नो ठान्दछन्, संघर्ष र इमान्दारी तालाई होइन । अर्काको रुमभित्र पस्यो, कामको वर्णन, अन्धविस्वासी कुरुपताका अगाडी हाम्रो साहित्यको के काम ? साहित्यसँग बाँच्नेहरुलाई बहुत गाह्रो छ जहाँ काम गरिन्छ त्यहाँ केटासँग बोल्दा, काम गर्दा उनीहरुका श्रीमती मार्फत् गलत भ्रममा पारेर परिश्रमको पैसा खोस्छन् ।
राम्रो र असल नचिन्ने वेहोसी महिलाहरुले पनि समाजमा विकृति र नारी शोषण नल्याएका होइनन् । कतिपय नारीहरु आफ्ना बुढासँग राम्रै बोलेपनि एकल तथा अविवाहित महिलाहरुलाई इज्ज्यत नभए झै शंका गर्दछन् । अविवाहित तथा एकल महिला भएर आफ्नो चरित्र र शरिर बचाउन गाह्रो छ र झुटो आलोचनाको सिकार बनाउछन् । महिलाहरु समाजमा लोग्ने भेट्ने वित्तिकै स्वर्गको अनुभूति गर्छन् । अविवाहित महिलालाई हेप्छन् । आफ्नो बुढा अर्को केटीसँग जिस्किदा आफ्नो बुढो ठिक र त्यो अविवाहित महिलालाई बेठिक भन्छन् ? यि कारणले महिलालाई सुरक्षाको अनुभूति हुँदैन । आफ्नो गल्ती नदेख्नेहरु अरुलाई धेरै बोलि भन्दै हिड्छन् । समाजमा त्यस्ता महिलाले उठ्न दिएका
छैनन् । साहित्य यसरी ओझेलमा पार्छन् । नङग्याउन खोज्ने, रिस गर्ने र चरित्र हत्या गरि केही नजान्ने बनाउने कारणले साहित्यलाई बचाउन गाह्रो छ ।
शहरका घरमा हेरौं वा अन्य एकल तथा अविवाहित महिला देखेपछि हेप्ने, जिस्किने एउटा नोकरको रुपमा प्रस्तुत बनाउन खोज्दछन् । साहित्यलाई बचाएर वातावरण गराउन गाह्रो छ । अर्काको घरमा बसिन्छ, विद्रोह गरे घरसर भन्दछन् यो पनि साहित्यलाई ठेस लाग्ने वातावरण हो । साहित्यलाई यति गाह्रो छ बचाउन, जन्माउन यी क्रुरहरुको अगाडी । साहित्यकार म जस्ताले अर्कालाई डिस्टप नी नगर्ने अरुले आफ्नो व्यक्तिगत कुरामा हस्तक्षेप नगरोस् भन्ने हुन्छ । साहित्यसँग बाच्न अरु भौतिक शरिरसँग जिस्कने रमाउनेसँग मिल्न सकिदैन । यसरी द्धन्द्धका चोटमा प्रतिकार गर्ने चेलीसँग जिस्किएर शरिर र जिउको कुरा गर्दछन् अश्लिलहरु, समाजका वेइज्यति पशुहरु । त्यसैगरी तिनका छोरीप्रति अरुले गर्दा के हुन्छ ? त्यसैले साहित्य कति गाह्रो छ उज्यालोमा ल्याउन । भौतिकवाद, काठमाण्डौका घर, गाडी, महल, महंगा कपडा, गरगहनासँग दाजेर दाजिन्न, यो अमूल्य छ । यो उनीहरु भन्दा कयौं माथि र हिमालभन्दा माथि र पारी चम्किरहेको छ, ओझेलमा पार्न खोज्दछन्, दलाल पूँजिवादका उपज हरु । कति पढेको भनेर खलवल बनाउने भौतिकवादका उपजहरुले आफ्नो बच्चालाई संस्कारदिन जान्दैनन्, के को साहित्यलाई सम्मान दिने हो ? पत्रपत्रिकामा यर्थाथ लेखेका च्यातेर हिडेका पनि देखियो । समाज किन वेहोस छ ? अश्लितालाई सम्मान र साहित्यलाई लात किन ? शक्तिको नाममा अश्लिल, असभ्यता र अन्धश्विास समाजमा जमेको पाइन्छ । यस्तो झारपातबाट साहित्यलाई गोडमेल गराउन गाह्रो रहेछ । त्यसैले साहित्यलाई अडर नगरौं । साहित्य कसैको दासत्वमा रम्र्दैन बरु विद्रोह गर्छ । आफुले अरुलाई दुःख नदिएपछि अरुको दासत्व साहित्यले स्वीकार गर्दैन । अत्याचारको विरुद्धमा अध्यारोमा पनि वत्ति बोल्छ शब्दहरु सँग । त्यसैले यहाँ संगत मान्छेको भन्दा साहित्यसँग मिल्नु र अक्षरसँग उठ्नु छ, आफूलाई दास र नोकर बनाउनेसँग होइन । त्यसैले यस्ता किच–किचेहरुका अगाडी साहित्य लुकाएर सिर्गानु छ, संघर्ष गर्नु छ ।
साहित्यकार विजय बजिमयको निधन
प्रकासित : २९ कार्तिक २०७८, सोमबार
“मैले देखेको कतार” नामक पुस्तक उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनले एक कार्यक्रमबीच लोकार्पण
प्रकासित : २५ कार्तिक २०७८, बिहीबार
भीम रावलले गुमाएको माधव नेपालको विरासत थाम्ने अवसर
प्रकासित : ११ कार्तिक २०७८, बिहीबार
Eye of Sellers to Single Women
प्रकासित : २६ आश्विन २०७८, मंगलवार
The Mistakes of Some Women and Some Journalists
प्रकासित : २४ आश्विन २०७८, आईतवार
Women Writer should be Secured from Doubtful Bearlike People
प्रकासित : १९ आश्विन २०७८, मंगलवार
Women should not to be Victimized in Everything
प्रकासित : १४ आश्विन २०७८, बिहीबार